नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सर्वोच्चको फैसला अघि नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउने तयारीमा लागे चार दल !
सर्वोच्चको फैसला अघि नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउने तयारीमा लागे चार दल !
प्रचन्ड र बाबुरामको माकुरे जालमा नराम्ररी फसे प्रधान न्यायाधीस पनि, काङ्रेस एमाले सहित सबै शती जाँदै !
प्रमुख चार दलहरु सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु सहभागि बैठकले २२ गतेसम्म सम्पुर्ण विबादित विषयमा सहमती गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दलहरुबीच प्याकेजमा सहमती भएको २४ घण्टाभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सपथ गराउने सहमती भएको जानकारी गराए । दलहरुबीच नागरिकता, मतदाता नामावली, समायोजन रोजेका लडाकुको दर्जा निर्धारण लगायतका विषयमा मतभेद कायमै छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटको
अन्तिम सुनुवाई आउँदो २४ गते हुदैछ । तर दलहरु भने सर्वोच्च फैसला अघि नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउने तयारीमा लागेका छन् ।